Muuqaalka Bulshada: Mareykanka oo 28 sano kadib safaaradii Soomaaliya dib ufuray ( dhegayso) – Radio Daljir
Muuqaalka Bulshada: Mareykanka oo 28 sano kadib safaaradii Soomaaliya dib ufuray ( dhegayso)
Diseembar 5, 2018 7:31 b 0
Ku soo dhawaada dhegaystayaal Barnaamijka Muqaalka Bushada ee radio Daljir oo maalinkasta ka baxa dhamaan xarumaha Daljir ee Soomaaliya ,marka laga reebo maalinta Jimcaha.
Barnaamijka Muuqaalka Bulshada maanta waxa uu ku saabsanyahay ,dowladda mareykanka ayaa magaalada Muqdisho mudo 28 sano kadib waxa ay ka furatay safaaradii ay kulahayd Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay 1991kii ,markii dalka Soomaaliya ay ka dhaceen dagaaladii sokeeye .
Hadaba maxaa iska badalaya Soomaaliya dhanka amniga iyo dhaqaalaha ?
kaga bogo Muuqaalka Bulshada oo ay Bosaaso ka soo jeedinayso wariye Faadumo Degan Daahir .
Ciidamada dowlada oo garab ka helaya Mareykanka oo weerar ku qaaday Al-Shabaab
Saaka & Dunida iyo Xuseen Cabdi Jimcaalle (Madar), Daljir Bossaso (dhegayso)